Iya Kokuqeqeshwa Okuhle Kakhulu kwe-MIS eNoida
Uhlu Lwezakhiwo: » Isiqondisi sebhizinisi » Abahlinzeki Bezimali Ngezimali » Iya Kokuqeqeshwa Okuhle Kakhulu kwe-MIS eNoida1
Ishicilelwe i-8 ezinyangeni ezedlule
Iwebhusayithi :: https://slaconsultantsnoida.in/training-institute-data-analytics-course-excel
Ikhodi Yokuposa: 201301
I-MIS imele uhlelo lolwazi lokuphatha lokhu unesibopho sokuqoqa imininingwane emithonjeni eminingi futhi uyihlaziye ukuze isize abaphathi bathathe izinqumo ezingcono. Kuyisici esibalulekile embonini yamabhizinisi futhi noma ngubani ozimisele ukungena emkhakheni we-mis udinga ukuya ku-MIS Training Course eseNoida. AbakwaSLA Abacebisi uNoida yisikhungo esihola phambili sokuqeqesha esinikeza ukuqeqeshwa okungcono kwe-mis futhi ihlanganisa ezahlukene zamathuluzi ama-mis afana ne-MS Excel, VBA kanye ne-macros, i-sAS, i-tableau, i-mS Access ne-SQL, njll. Ukuqeqeshwa kungahanjwa yinoma ngubani iziqu zokuthweswa iziqu futhi ziqhutshwa ngabaqeqeshi abahle kakhulu bezinkampani abanolwazi olungaphezu kweminyaka eyi-10 emkhakheni. Ababambiqhaza banikezwa ukuqeqeshwa okusebenzayo kwesikhathi sangempela kanye namaphrojekthi abukhoma futhi ekugcineni koqeqesho, kunikwa nesitifiketi esifanelekile kanye nokwesekwa kwamaphesenti ayikhulu emisebenzi. I-SLA Consultants uNoida iyindawo ekhula njalo njengendawo yokufunda nokuthuthuka ye-IT ehamba phambili ephezulu kakhulu eminyakeni eyedlule. Umbono wethu ukunikeza i-100% ye-IT & non-IT ukuqeqeshwa komfundi. Ngemuva kokuphothula izifundo zomfundi uzothola isitifiketi esamukelekayo embonini kanye nokuxhaswa okungu-100%. AbakwaSLA Abacebisi uNoida yisikhungo esiphakeme se-IT & non-IT esikwamukelayo samukela uFresher nobungcweti ukujoyina izinhlelo zethu zokuthuthukisa kungaba ukuqala noma ukuthuthukisa ukukhula komsebenzi wakho.
Abacebisi be-SLA uNoida
I-E-48, isitezi sokuqala, isigaba 3,
Shayela: + 91-9999491895 / + 91-9069663742
I-imeyili: - [Email protected]
Iwebhusayithi: - https://slaconsultantsnoida.in/
Ibhaliswe ku-9. Aug 2019
Xhumana nomkhangisi I-0906966xxxx
Ibhaliswe ngo-Agasti 9, 2019
Ukunikezwa kwemalimboleko okuqinisekisiwe ...... Faka isicelo Manje
Trade / projekthi Ukuxhasa Imali Ithuluzi Lezimali Zokuqashisa Nokuthengisa Bg / sblc
Imalimboleko Yemali Eqinile
Imalimboleko, Ukuxhaswa Kwezimali Zeprojekthi, Izimali Zohwebo ngeBGs / SBLC